# (၆)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
# (5)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း »
# (၆)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများPublished July 9, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၆) ဖြစ်ပါက (၆)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက် မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ်ပါက (၆၃၉) ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	22 comments on “# (၆)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ဝိသေသ လက္ခဏာများ”	myitmoe on September 16, 2009 at 8:52 pm said:
အရမ်းပြည့်စုံကောင်းမွန်ပါတယ်၊ ၆ ကြွင်းဖွားရဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကိုသိရခြင်းကြောင့်
swe on October 4, 2009 at 9:13 am said:
I couldn’t find for အကြွင်း ၁ မဟာဘုတ်ဖွား အဟော
Dr.Tin Bo Bo on October 4, 2009 at 9:17 am said:
ဒီနေရာကို Click လုပ်လိုက်ပါ။ (၁)ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွား အဟောဆီ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
sai lao moon on October 8, 2009 at 1:19 pm said:
sai lao moon on October 8, 2009 at 2:08 pm said:
ဆ၇ာေ၇းထားတာတွေ မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော့ ကို 1343 ခု သီတင်းကျွတ်လဆန်း(3)၇က်
မှာမွေးပါတယ်။ဒီနှစ် နဲ. နောက်နှစ် ကံကြမာ ကို သိချင် ပါတယ်
aung lwin on October 9, 2009 at 1:19 am said:
your predicts are almost 100% right. I was born in Sept 10, 1967. I have experiencedalot difficulties and hardship in my life even I bear good heart.Whatever I made decision for my life, it spoiled.It had never happened. If you don’t mind can you please calculate any luck for next year. my favorite number is 11.
P.S please forgive me writing in English.
Pyi Soe Maw on December 1, 2009 at 6:01 pm said:
I am that ’6′ no person and I wanna ask you that if I didn’t face any of that bad matters I mean lost of Father or mother, breaking marriage or something else, what will happen in next ? I was born in 1350(1988 April 28). But what I find out is that there is nothing the same with your predicts and me. I mean not yet. That’s why I wanna know that. If you don’t mind, please reply me.
Dear GuRu on January 5, 2010 at 11:10 am said:
thank you so much for u ..
may u meet good luck and good friend this year .. !!
y2khine on February 3, 2010 at 3:19 pm said:
yan naing on February 3, 2010 at 3:27 pm said:
ကျွန်တော်က ၆ ကြွင်း ရာဇ(ဗုဒ္ဓဟူး)ပါ။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်မလေးကလည်း ၆ ကြွင်း ရာဇ(ရာဟု)ပါခင်ဗျား………..အဲဒါ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်းဖက်ရင် အဆင်ပြေ နိုင်…မပြေနိုင်ဆိုတာကို အရမ်းကို သိချင်နေပါတယ်ဆရာ………ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အခြေအနေကို ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ………
khin on March 13, 2010 at 10:25 am said:
မှန်လိုက်တာဆရာရယ်။ အမဝမ်းကွဲရယ်။ အဖေရယ်။ အမအရင်းရယ်။ အားလုံး၆ကြွင်းတွေပါ။ အမဝမ်းကွဲဆိုရင် သူ့အသက်၇နှစ်မှာအဖေအမေကွဲသွားတာ။ အဲဒိနောက်အမေကနိုင်ငံခြားရောက်သွားတော့ အတော်လေးကိုငွေရေးကြေးရေးအဆင် ပြေသွားတယ်။ အဲဒိတော့ဆရာပြောသလို အောက်ခြေလွတ်သွားရော။ အခုတော့ရှိသမျှအားလုံကုန်ပြီး ဘဝပျက်သလောက် ကိုဖြစ်နေပါပြီ။ ယောက္ခမအိမ်မှာ ကပ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။ မျက်စိရှေ့မှာ တင် ဖြစ်သွားတော့မေ့ နိုင်စရာကိုမရှိတော့တာ။ ၄ ရက်နေ့မွေးတဲ့ ၆ ကြွင်းပါ။ ခေါင်းမာတဲ့နေရာမှာလည်းသူမတူအောင်ပါပဲ။ဆရာ့ပညာကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်
Nwelar on May 12, 2010 at 12:49 pm said:
I couldn’t find for အကြွင်း ၂ မဟာဘုတ်ဖွား အဟော
Dr.Tin Bo Bo on May 12, 2010 at 4:23 pm said:
မဟာဘုတ် (၂)ကြွင်းဖွားအဟောက အပေါ်ထိပ်က “ရေးပြီးခဲ့သမျှဆောင်းပါးများ” ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ နောက်ကို ဖတ်ချင်တာ ရှိရင် အဲဒီထဲမှာ အားလုံးရှိတာမို့ ၀င်ဖတ် နိုင်ပါတယ်။ လင့်ခ် အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်သွားချင်ရင် ဒီနေရာကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။
အောင်အောင် on September 18, 2010 at 8:22 pm said:
ဆရာ 6ကြွင်းဂဏန်းကို ဖတ်သွားပါတယ် ကျွန်တော်လည်း 6ကြွင်းဂဏန်းဆိုတော့ ဆရာပြောတာတွေမှန်တယ် ဒါပေမဲပ ကျွန်တော့် မွေးရပ် မှန်မမှန်ပြန်စစ်ပေးပါဆရာ 1989 မှာမွေးဖွားပီး4လပိုင်း 9ရက်နေ့မှာမွေးတာပါ ။အဆိုးဆုံးနေရက်တွေဖြစ်နေပီလား ဆရာ
တီးလေး on June 13, 2011 at 1:23 pm said:
ကျွန်တော်က ၆ ကြွင်း အထွန်း ဖွားလည်း ဟုတ်၊ ၄ ရက်နေ့ မှာ မွေးတဲ့ ၄ ဂဏန်း သမားလည်း ဟုတ်ပါတယ်.. ဆရာပြောတာ တော်တော်များများ မှန်ပါတယ်.. ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးများလည်း အကြံပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
nyohein on June 30, 2011 at 9:50 am said:
tee lay….kya nor nae fri loat par lar….
kya nor lal ae lo bal….6 kwyin phwar….4 no pal….nay ya htine ya tar taw taw soe tal byar…..
Thet Aung on August 5, 2011 at 4:41 pm said:
၆ ကြွင်း ပုတိ ဒီငတိ တော့မလွယ်ဘူး ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ပြောတာပါ။
Pann Myat Mon on December 19, 2011 at 4:23 pm said:
ဆရာ Current Of Density အကြောင်း ဆောင်းပါးလေးဖတ်ချင်ပါတယ်ဆရာ အဆင်ပြေရင် ရေးပေးပါဆရာ
thetoomg on February 8, 2012 at 11:17 pm said:
ဆရာရေကျွှန်တော်ကသက်ဦးမောင်ပါ(၆ကြွင်းဘင်္ဂဖွား)ပါမွေးနေ့ ကတော့ (အင်္ဂလိပ်လို)(9.9.1988)အချိန်ကတော့ 11း55amပါ
သောကြာသားပါဆင်းရဲတာတော့ မပြောပါနဲ့ တော့ ကိုယ့် ရဲ့ ကံကိုတောင်ကိုမယုံဘူး
ဗေဒင်ဆရာတိုင်းပြောတော့ ချမ်းသာမယ်တဲ့ အသက်26နှစ်မှပါဟုတ်ပါ့ မလား
ဆရာပြောတာမယုံလို့ မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ ထပ်ပြီးသေသေချာချာသိချင်လို့ ပါကူညီပါအုံး
ဆရာရယ်ကျွှန်တော့် emailလိပ်စာကthetoomg.mm@gmail.comပါဆရာအားမှဟောပေးပါဆရာရယ်ကူညီပါဆရာ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတန်းအားပေးပါတယ်ရွင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေ….
မေလင်း on March 30, 2012 at 1:08 pm said:
မှန်ပါတယ်။ (၆)ကြွင်းဖွား လည်းဖြစ် မွေးဂဏန်းက (4)ဏန်းသမား လည်း ဖြစ် ဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့ အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်နေရသူလည်းဖြစ် ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း မကောင်းပါဘူး။ ခုထိလည်း ဒုက္ခတွင်းထဲက မတက်ရသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ၆ ကြွင်း ကျမှ ဒုက္ခ များနေရတာလဲ ကျမနဲ့တင် မပြီးသေးပါဘူး။ သမီးလေး က ပါ ၆ ကြွင်းပါတယ်။ ၂၈ မွေးတော့ ၁ ဂဏန်း ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
စန်း on April 14, 2012 at 3:00 am said:
၆ ခုကြွင်းပါ၊ဆရာ့ကို ယုံကြည်လေးစားပါတယ်၊ဆရာ့အဟောများ
kaykhine on February 4, 2013 at 1:19 pm said:
ဆရာရေးတဲ့( ၆ )ကြွင်းအကြောင်းက အလွန်မှန်ပါတယ်။မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာလဲမှန်ပါတယ်၊မှန်ပါတယ်၊ဆရာမင်းသင်္ခ ကလည်း (၆ )ကြွင်းပါ။သမီးကရာဇဖွားပါ၊ လောကဓံ အတက်အကျလည်းများပါတယ်။အလုပ်ကကောင်းရင်လည်းအရမ်းကောင်းပြီးမမြဲပါဘူး
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,584)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,967)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,671)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,340)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,408)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,558)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,579)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,947)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,290)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,268)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,093)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,826)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,787)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,301)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,128)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,833)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,487)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,154)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,827)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,681)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,550)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,549)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,258)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,239)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,899)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,684)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,476)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,022)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !